Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » NgoMvulo oSmart kwi-IMEX America: Ukuhlangana kwakhona kwabahlobo bakudala
IMEX America Smart ngoMvulo
"Oku kuvakala ngathi lihlabathi elitsha kumzi mveliso wethu kwaye kundinika ithemba lokuba u-2022 iya kuba ngunyaka onamandla." Umthengi u-Valeria Serrano, ovela kwi-CTA yoMsitho woyilo kunye ne-DMC eMexico, washwankathela uvuyo kunye nemincili efunyenwe kwi-IMEX yaseMelika yangaphambi kokubonisa usuku lokufunda, i-Smart Monday, inikwe amandla yi-MPI. “Kufana nokudibana nabahlobo bakudala,” waqhubeka. “Ndiphinda ndinxulumana nabahlobo bam beshishini kwaye ndinentlanganiso ezininzi ezicwangcisiweyo kwezi ntsuku zimbalwa zizayo.”
Amandla obomi, amava obuqu avakala ngokuvakalayo nangokucacileyo kwabaninzi.
NgoMvulo oSmart, oxhaswe yiMPI, ebanjwe ngoMvulo, ngoNovemba 8, yayilusuku olunikezelweyo lokufunda kwangaphambili ngaphambi kwe-IMEX America.
Usuku lwaqaliswa ngenqaku eliphambili nguGqr Shimi Kang, ugqirha ophumelele ibhaso we-Harvard oqeqeshwe ngoogqirha, umphandi, kunye neengcali ze-neuroscience.
Umthengi uDonna Rogers, osuka kwiSolus Sustainable Hydration yaseCalifornia, uvumile, “Sele ndiyigcwalise ikhalenda yomphathi wam ngeentlanganiso zobuso ngobuso kunye nemicimbi yenethiwekhi!”
Amandla obomi, amava omntu avakala ngokuvakalayo nangokucacileyo nabaninzi njengomthengi osindleke uShelby Green, osuka kwiQela leMicimbi yeShishini eCalifornia, ucacisile, “Ndichulumancile ukubona abantu kwakhona-kwaye ndonwabile ukuba ndingabikho kwenye ifowuni yevidiyo. !"
Iinkomfa kunye nemisitho ngabagcini bentlalontle yabantu
NgoMvulo oSmart, oxhaswe yiMPI, ebibanjwe ngoMvulo we-8 kaNovemba, yayilusuku olunikezelweyo lokufunda kwangaphambili IMEX yaseMelika eqala ngomso ukuya kwi-11 kaNovemba eMandalay Bay, eLas Vegas.
Usuku lwaqaliswa ngenqaku eliphambili nguGqr Shimi Kang, ugqirha ophumelele ibhaso oqeqeshwe yiHarvard, umphandi, kunye neengcali ze-neuroscience. Kwiseshoni yakhe, Ukujonga izinto eziyinyani ezichaseneyo: Uxinzelelo lwenkulungwane yama-21 kunye nezinto ezintsha, uShimi uqaqambise indlela iingcali zeminyhadala eziluqonda ngayo unxibelelwano olusisiseko phakathi kwamava obuso ngobuso kunye nempilo yengqondo esithi: “Nonke ningabasebenzi bezempilo yengqondo - niyazi ukuba sifuna iintlanganiso, sifuna iinkomfa, sifuna ulwazi. Kubalulekile ukwenza oku njengenxalenye yamava ethu oluntu - iinkomfa kunye neminyhadala ngabagcini bempilo-ntle yabantu. "
UGqr. Shimi Kang
Amandla endalo okomeleza intlalo-ntle kunye nokuphucula amava omnyhadala yayiyeyona nto kugxilwe kuyo iNdalo yendawo-Inkqubo yendalo eyimpumelelo yomsitho. UJanet Sperstad, uMlawuli weFakhalthi kwiKholeji yaseMadison, uye wanikezela ngokuntywila nzulu kuye kutshanje ekhutshwe “Indalo yendawo” IMEX whitepaper. Unike isikhokelo malunga nendlela yokuhambisa amava esiganeko "ephelisa unxano lokunxibelelana nabantu kunye noluntu." Uphando lwakhe lunika iinkcukacha zeendlela zokulungelelanisa ezona zifundo zibalaseleyo zendalo ukwenza umsitho oyimpumelelo, njengokusebenzisa izibane, indawo, kunye neempawu zokusingqongileyo ukuze kukhuthazwe inguqulelo.
Amaxesha e-Lightbulb-amandla okuzinza
Imiba yokusiNgqongileyo ibiphambili kunye nombindi wokhenketho olungundoqo lweNtlanganiso kunye neeNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide ze-MGM – umboniso okhethekileyo wasemva kwemboniso kwiinzame zozinzo lweMandalay Bay. Abathathi-nxaxheba baye baziswa kowona mgangatho mkhulu wophahla waseMelika uhlala ecaleni kweminye imilinganiselo elungele iplanethi efana nenkunkuma yokutya kunye nokuhlela inkunkuma kwiindawo ezili-11 zokurisayikilisha kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide. Esona senzo sinzima? Ukutshintsha ii-bulbs kwii-LEDs ezonga amandla - zonke zi-1.4 yezigidi!
Ukhenketho olungundoqo lweNtlanganiso ye-MGM lwaluyinxalenye yenkqubo yokhenketho eyenzeka ngoMvulo we-Smart, inika amathuba okunxibelelana ngaphandle komgangatho womboniso. I-Lip-Smacking Foodie tour yabelane nge-lowdown e-Las Vegas kunye nokutya okugqwesileyo kwi-Strip, ngelixa i-Mystery Trip yayithembisa ngorhatya olumangalisayo lwamava awodwa, iindawo ezipholileyo, ukutya okumnandi kunye nenkampani enkulu.
Itekhnoloji yomsitho inamanani aphezulu kwi-ajenda yabacwangcisi beentlanganiso ezininzi kwaye yajongwa kwiiseshini eziquka i-EventMB Event Innovation Lab™. I-masterclass yokucwangcisa umcimbi, ejoliswe kubacwangcisi beenkampani kunye ne-arhente, ibonelele ngendlela esebenzayo yokucwangcisa, ukuthengisa kunye nokuhanjiswa kweziganeko. Iseshoni yokunxibelelana isebenzise izifundo zezehlo kunye notshintshiselwano lweendlela ezilungileyo zokwabelana ngomxholo omtsha ofanelekileyo kwihlabathi elixubeneyo leziganeko kunye nokucwangciswa kwesiganeko esityebileyo kwitekhnoloji.
UZephia Bryant, umthengi osindleke ovela kwiBryant Educational Leadership Group eNorth Carolina, uchaze isizathu sokuba isihloko sincokole naye, "Uninzi lwemisitho yam kuye kwafuneka itshintshele kwi-hybrid ngoko ke ndijonge ezona ndlela zilungileyo kunye neendlela ezintsha."
I-IMEX yaseMelika ivula ngomso, NgoLwesibini Novemba 9, kwaye iqhuba de kube ngoNovemba 11 eMandalay Bay, Las Vegas.
Novemba 22, 2021 kwi-04: 10
Wonke umntu uyazi ukuba ubuhlobo buphawula ubomi obunzulu ngakumbi kunothando. Ngalo lonke ixesha, ufumana umhlobo wakudala kwaye kuvakala ngathi ukukhangela kwigumbi elinothuli, elinophahla oludala kwaye ufumane kwakhona ubutyebi. Enye indlela entle yokukhumbula iinkumbulo kukutyelela iindawo apho nichithe ixesha kunye ngaphambili.